मानिस केले बाँच्ने गर्छ ? - Baikalpikkhabar
लेखक- लियो टोल्सटोय
रूसकोकुनै गाउँमा आफ्नो नाउँमा एकबित्ता पनि जग्गाजमिन नभएको सिमोन नाउँ गरेको एउटा गरीब सार्की बस्थ्यो । त्यसैले उसले आफ्नी श्रीमती र छोराछोरीहरू राख्नलाई एउटा किसानको छाप्रो भाडामा लिएको थियो र ज्यालादारीबाट पेट पाल्थ्यो । ज्याला सस्तो थियो तर रोटी महङ्गो थियो त्यसैले उसले कमाएजति सबै खानामा खर्च भाइहाल्थ्यो । हिउँदमा लगाउन भनेर सिमोन र उसकी श्रीमती दुवै जनाका लागि भेडाको छालाको एउटामात्रै कोट थियो; त्यही पनि पुरानो र ठाउँठाउँमा फाटिसकेको । नयाँ कोट सिलाउन भनेर सिमोनले भेडाको छाला किन्नखोजेको पनि दुई वर्ष भइसकेको थियो । यसपल्ट भने हिउँद लाग्नुअघि नै केही पैसा जोगाउन सिमोन सफल भयो । तीन रूबल स्वास्नीको कन्तुरमा लुकाइराखेको थियो अनि गाउँका गाहकीहरूबाट उसले पाँच रूबल र बीस कोपेक उधारो उठाउन बाँकी थियो ।
सालहरू बित्दै गए । मिखायल सिमोनसित बस्न थालेको पनि छैठौं वर्ष लागिसकेको थियो । उसको दैनिकी पहिलेजस्तै थियो । ऊ कतै पनि जाँदैनथ्यो, आवश्यक परेको बेला मात्र बोल्थ्यो र यतिका वर्षमा जम्मा दुई पटक मात्र मुस्काएको थियो । पहिलोपटक जब म्याट्रिओनाले उसलाई खाना दिएकी थिई र दोस्रो पटक भलाद्मी सिमोनको छाप्रोमा आएको बेला । सिमोन आफ्नो कामदारसित ज्यादै खुशी थियो । अब उसले मिखायल कहाँबाट आएको हो भनेर सोध्न छोडिसकेको थियो बरु मिखायल गइहाल्ला कि भनेर डराउँथ्यो ।
तर मलाई अझै “मानिस केले बाँच्दछ” भन्ने सत्य थाहा हुनसकेको थिएन । त्यसका लागि मैले छ वर्ष कुर्नुपर्‍यो । आज यस महिलाले ती जुम्ल्याहा नानीहरू लिएर आई । मैले ती केटीहरूलाई चिनें र तिनीहरूको पालनपोषण कसरी र कोद्वारा भइरहेको रहेछ भन्ने पनि थाहा पाएँ । मैले सोच्न थालें त्यस भर्खरैकी सुत्केरीले बच्चाहरू आमाबाबुबिना बाँच्न सक्दैनन् भनेर बिन्तीभाउ गरेकी हुनाले मैले उसको कुरा पत्याएर पहिलोपल्ट उसको प्राण नलिई फर्किएको थिएँ । तर आज मैले देखें एकजना परचक्री महिलाले तिनीहरूलाई राम्रो स्याहार गरेर हुर्काइरहेकी रहिछ । आफ्नै कोखका बच्चा नभए तापनि ती नानीहरूका मायाले त्यो रोई र त्यसमा पनि ईश्वरले बास गरेको मैले देखें । अनि मलाई ईश्वरले जान्न पठएको तेस्रो सत्य थाहा भयो । “मानिस केले बाँच्दोरहेछ ?” अर्थात् मानिस अरू मानिसमा भएको ममत्वको कारणले बाँच्दोरहेछ । मैले चाल पाएँ मानिस आफ्नै स्याहारसुसारले होइन तर अरू मानिसको मायाममता र स्याहारसुसारले बाँच्दोरहेछ । ती केटीहरूलाई जन्माउने आमालाई उनीहरू कसरी बाँच्नेछन् भन्नेकुरा थाहा दिइएको थिएन । न त त्यस धनी मानिसलाई एकैछिन पछि आफूलाई बुट चाहिन्छ कि मुर्दा बन्दा लगाउन हलुका चप्पल चाहिन्छ भन्ने नै थाहा थियो । म धर्तिमा मानिस भई झरेपछि अर्को कुनै मानिसमा मेराप्रति दया पलाएको कारणले गर्दा बाँचे ।
म बाँचे किनभने तिमी र तिम्री स्वास्नी मप्रति दयालु भयौ । ती टुहरी केटीहरू बाँचे किनभने कोही एउटी परचक्री महिलाले तिनीहरूलाई आफ्नै छोराछोरीजसरी पाल्नलाई त्यसको हृदयमा ममता जाग्यो । आमाबाबु नभए तापनि तिनीहरू बाँचिरहेका छन् । बल्ल आएर मैले अन्तिम सत्य बुझें वास्तवमा प्रेमद्वारा मात्रै मानिस बाँच्ने रहेछ । जुन मानिसले ईश्वरलाई प्रेम गर्छ उसमा ईश्वर बास गर्छन् किनभने प्रेम नै ईश्वर हुन् ।”
सोमबार, २९ मंसिर, २०७७, बिहानको ११:२७ बजे
झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिना झापा / दोस्रो लहरको कोभिड–१९ को संक्रमणको दर यस जिल्लामा घट्दो क्रममा रहेको निष्कर्षसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले निषेधाज्ञामा केही खुकुलो गरेको छ । तर, संक्रमणको जोखिम रहिरहेको जनाइएको छ । आइतवार झापाका
सुरेन्द्र प्रसाद लामिछाने रुघा मर्की र खोकीले सिकिस्त भए झैँ भयो गति बिग्रेछ जिब्रोको खानाको संवाद नै गयो। खस्खस गर्छ घाँटीमा गतिलै बस्तु पो छ कि? निस्किदैन कतै पाखा जिब्रो पो बरु खस्छ कि! तातियो शरीर सारा पसिना
कृष्ण सेन ‘इच्छुक’का उत्कृष्ट ३ कविता
जेल म पर्खालभित्र छु तिमी पर्खालबाहिर छौ म पहराभित्र छु, तिमी पहराबाहिर छौ म यातना–गृहमा छु तिमी खुल्ला शिविरमा छौ सिकारीले बाँधेको छाँद होस् अथवा त्यो उसको फाँद होस् के फरक पर्‍यो र ? मित्र, अर्काको मुठीभित्र पराधीन जिन्दगी जहाँ
कृष्ण बजगाईं ‘ह्याप्पी बर्थडे आमा ! आज तपाईंको जन्मदिन । शुभकामनाको केही शब्द सहित तपाईको फोटो फेसबुकमा राखेको छु । मेरा साथीहरू र केही आफन्तहरूले लाइक र कमेन्ट गर्ने छन् ।’ एक एनआरएनले फोनबाट आमालाई भन्यो । ‘फेसबुक भनेको के
हो, ढाँट्दिन हजुर इतिहासको यस कठघरामा उभिएर सत्य-सत्य बोल्छु / निर्भयताका साथ बोल्छु हजुरलाई विश्वास लाग्ला नलाग्ला तर म रिठ्ठा नबिराई दूधको दूध बोल्छु/पानीको पानी बोल्छु हो हजुर म सत्य बोल्छु । जनयुद्धमा हिजो सेना हिँड्ने बाटोमा धराप थापेकै हौं
देशभरमै कोरना भाइरस कोभिड १९ को दोस्रोलहर घटीरहँदा...
झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिना झापा...
सुरेन्द्र प्रसाद लामिछाने रुघा मर्की र...
जेल म पर्खालभित्र छु तिमी पर्खालबाहिर छौ म...
कृष्ण बजगाईं ‘ह्याप्पी बर्थडे आमा ! आज तपाईंको...